Zvinyorwa zvinyorwa Seix Barral: Kurume 2017 | Zvazvino Zvinyorwa
Zvinyorwa zvinyorwa Seix Barral: Kurume 2017
Ichi ndicho chinyorwa chechitatu uye chekupedzisira chichireva zvinyorwa zvekunyora izvo zvinounzwa kwatiri mu yekunyora Seix Barral. Mazuva mashoma apfuura takakuunzirai nhau dzemwedzi wa KANAKANAK nezuro iya yemwedzi wa February. Nhasi tinokuunzirai zvinyorwa zvekunyora Seix Barral: March 2017.
1 Nhau dzaKurume, 2017
1.1 "Dziviriro" naGabi Martínez
1.2 "Anofa Anosara" naDonna Leon
1.3 «Natural mutemo» naIgnacio Martínez de Pisón
Nhau dzaKurume, 2017
Idzi ndidzo dzinotevera nhau kuti Edhisheni Seix Barral ichaburitsa inotevera Kurume:
"Dziviriro" NaGabi Martínez.
"Munhu anofa" naDonna Leon.
"Natural mutemo" yakapihwa naIgnacio Martínez de Pisón kana tiine ruzivo.
"Dziviriro" naGabi Martínez
Nhoroondo inoenderana nezvisinganzwisisike nyaya yechokwadi yechiremba uyo akatambura chirwere ichi chaaiongorora uye akaunganidza vekurapa kuti vazviratidze.
Gabi Martínez anovakwazve nyaya yechokwadi yaDr. Escudero, chiremba wezveuropi akatambura kupenga panguva yaakaedza kukuvadza vaanoda. Kutevera kuongororwa zvisirizvo, akagamuchirwa nevamwe vake kuchipatara chepfungwa uye akarapwa kurapwa kwechirwere chepfungwa chaakange asina. Mushure megore mu limbo, uye nekuda kwezvikonzero zvisina chokwadi, akatanga kupora. Akakwanisa kudzidzira kurapa zvakare uye, nemukana unoshamisa, akanzwa kuti airwara nechirwere chetsinga dzichangobva kuwanikwa: chirwere chisingawanzoitika chemuviri icho iye chaakange aongorora.
"Anofa Anosara" naDonna Leon
Munyori Donna Leon anopa bhuku rake razvino: "Munhu anofa", kwaanotiratidza nemhosva nyowani yeiyo isingakundike Brunetti. Mabhuku ake, aakapihwa iyo Carvalho Mubayiro 2016, dzakaburitswa munyika makumi matatu nemana nyika uye chiitiko chekushoropodza nekutengesa muEurope neUnited States.
Brunetti isingakundike inoda zororo. Mune izvi, vese chiremba wake nemukadzi wake, Paola, vanobvumirana, uyo akagutsa murume wake kushandisa nguva mumusha wemhuri pachitsuwa cheSant'Erasmo, mugungwa reVenetian. Commissioner anoronga kuzorora ari ega, achiverenga mabhuku uye kukwasva kuitira kuti agadzire musoro wake kure nehofisi. Pane imwe nguva ariko, anoshamwaridzana naDavid Casati, murume anotarisira kuchengeta imba, murume akaoma uye akasarudzika uyo akangotarisira chinhu chimwe kubva pakafa mukadzi wake: kuchengeta nyuchi dzake, idzo dziri kutsakatika munzvimbo dzese. ... nekuda kwechimwe chiitiko chisingatsanangurike.
Kana mutumbi wevanyanzvi vanoziva zvitsuwa kusvika millimeter zvioneka zvanyura mumvura dzegungwa, Brunetti anoisa timu yake kuti igadzirise nyaya iri pakati peiyo ecosystem iri panjodzi.
«Natural mutemo» naIgnacio Martínez de Pisón
Ignacio Martínez de Pisón akagamuchira mibairo yakawanda yezvinyorwa zvemamwe emabhuku ake: Casino de Mieres Mubairo yebhuku rake «Unyoro hweShato» (1984); San Clemente Mubairo 2009 and the Giuseppe Acerbi Mubayiro 2012 yenyaya yake "Mazino emukaka" (2008); Vatsoropodzi Mubayiro 2011, the Ciutat de Barcelona Mubairo 2012, the Aragonese Literature Mubairo 2011 and the Hislibris Mubairo weHistorical Literature 2011 yebhuku rake "Mangwana"(2011); National Narrative Mubairo 2015 y Cálamo Bhuku reGore Mubairo 2014 yebhuku rake "Mbiri yakanaka."
Nezve Ignacio Martínez de Pisón, vatapi venhau nevamwe vanyori vakati:
"Munyori wechokwadi, mugari wenhaka yaPío Baroja naSender, John Cheever naPatrick Modiano, kana Mario Vargas Llosa ... Zvisikwa zvake zvinoburitsa chokwadi, chokwadi chechokwadi uye chokwadi chakakosha"rakanyorwa naAnton Castro, Heraldo de Aragón.
"Munyori akasimba kwazvo, mumwe wevakuru"NaEnrique Vila-Matas.
«Muchikamu chekutanga chevatauri vedu»rakanyorwa naRicardo Senabre, El Tsika.
"Akanaka murondedzeri wenhau […] Naye akauya zororo kune nhoroondo uye nemuedzo weutsinye wekugadzira nhoroondo"naJordi Gracia, Babelia.
"Pakati paMarse naMario Vargas Llosa", Esquire.
"Natural mutemo" Inosanganisira mumusoro wayo iwo makore umo kuvandudza kwakazara kwemutemo kwakatanga kuvakwa, mukupesana pachena nenguva yakareba pakange pasina kusangana pakati pemutemo nekutonga.
Kana iwe uchida izvi zvinyorwa kwatinokuzivisa iwe nhau dzese idzo muparidzi mumwechete achazopa, tiudze isu muchikamu chedu chemashoko. Kana, kune rumwe rutivi, uchivafarira, asi iwe uchifarirawo vadiki kana vashoma vanozivikanwa vashambadzi, isu tinodawo kuziva ...
Kana tikasaverenga kusvikira 2017, Goredzva Rakanaka!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zvinyorwa zvinyorwa Seix Barral: Kurume 2017
Aula de Escritores, chikoro chekupayona cheBarcelona
Zvinyorwa zvinyorwa Seix Barral: Kukadzi 2017